Soomaali iyo ajaanib dalka Canada ku xusay Hodan Naaleeye - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Sonic
Image caption Magaalada Edmonton
Dadkii halkaas ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Jibril Cali Hareeri oo ah gudoomiyaha Somali Canadian and Cultural Society oo ah hay'adda qaban qaabisay kulanka.
"Waxan halka isugu yimid bulshada Soomaalida ee degenaa Magaalada Edmonton, si aan u xusno 26 qof ee lagu dilay Magaalada Kismayo iyo walaasheen Hodan Naaleeye oo ahayd gabar ka soo jeeda Magaaladan, oo iyadoo 6 sano jir ah timid Canada, halkanna ku dhigatay dugsiga hoose, " ayuu yiri Jibril Cali.
Lahaanshaha sawirka Lorne Dach
Image caption Lorne Dach ayaa ka mid ah xildhibaanada dowlad-gobaleedka Alberta
"Hodan Naaleeye waxay ahayd gabadh isku kalsoon, ka xildhibaan ahaanna aad ayaa ugu faanaa, waxay ahayd gabadh kudayasho mudan, waxayna ku dadaali jirtay inay Soomaalida dalka Canada wax barto iyo in Soomaaliya ka muujiso sawir wanaagsan", ayuu yir Lorne Dach.
Lahaanshaha sawirka Hodan Naaleeye Facebook
Image caption Allaha u naxariisto
Dadaalkeedi wuxuu ahaa inay diiradda saarto dhiirogelinta da' yarta Soomaalida, si ay dib ugu soo laabtaan dalkooda, qeyb na uga qaataan dib u dhiska dalka, waxayna taas horseeday in bulshada soomaaliyeed ay si weyn u aqoonsadeen howshii ay heysay, balse dhimashadeedi ayaa waxaa ka dhashay naxddin.
Hodan Naaleeye waxay ku dhalatay magaalada Laascaanood balse waxay ku barbaartay dalka Canada, kaddib markii qoyskeeda ay tegeen dalkaas, waxay sannadkii lasoo dhaafay go'aansatay inay dib ugu laabato Soomaaliya.
Markii ay jirtay, da'da 30, waxay Hodan dhameysay waxbarashada saxaafadda ee jaamacadda, sannadkii 2014-ki waxay bilawday telefishinka Integration TV kaas oo tebiyo wararka khuseeyo guud ahaan Soomaalida.